Ihe Emily Johnson dere na Martech Zone |
Edemede site na Emily Johnson
A na-ahụta ụlọ ọrụ B2C dị ka ndị na-agba ọsọ n'ihu na atụmatụ nyocha ndị ahịa. Channelszọ dị iche iche dịka e-commerce, mgbasa ozi mmekọrịta, na azụmahịa azụmaahịa enyerela ụdị azụmaahịa a aka ịkọ ahịa ma nye ndị ahịa ọmarịcha ahịa. Karịsịa, data buru ibu na nyocha dị elu site na usoro mmụta igwe na-enyere ndị B2C ndị na-eme atụmatụ aka ịmata omume ndị ahịa na omume ha site na sistemụ ịntanetị. Igwe ihe na-enye igwe n’enye gi ikike inweta ihe omuma banyere ndi ahia. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ B2B kuchiri ya